Shishi guta rinosimudzira kuongororwa nekutenga maitiro ekuvandudza nekudhinda indasitiri
Kubva kuguta redu nguva pfupi yadarika yekuziva shishi dhorobha, kudhiza nekudhinda indasitiri kusimudzira indasitiri yekudhinda uye yekudhaya kuti ive “yepamusoro, yakasvibirira fashoni”, yemuno "2020 pagore shishi guta kudhinda uye dhayeti (yakashambidzwa) scging system yemabhizinesi" (pano inonzi "grading system"), mushure mekugadzirisa nekugadzirisa iyo system pane hwaro hwepakutanga, uye kuwedzera bhizinesi r & d dhipoziti, kuvandudza nzira nyowani yekushandisa, yakadai seyemutoro wekutungamira zvinotungamira zviratidzo. Panguva imwecheteyo, kudhinda kwemuno nemabhizimusi ekudhiza vakatora zvakare danho rekuita mukutenga-tenga nekutenga pamhepo nezvimwe zviitiko kukwezva emabhizinesi ezvigadzirwa zvekunze ezvigadzirwa zvekunze kubva kuindasitiri yekudhinda nekudhaya nyika yese, kuitira kuti kuve nekuvandudza kunaka uye kugona kudhinda kwedhorobha medu nemabhizimusi ekudhiza uye kusimbisa mhando.
Isa zvitsva zvinotungamira zviratidzo
Zvinonzi iyo yakagadziridzwa uye yakagadziriswa "scging system" inoumbwa nezvikamu zvitatu: chikoro chekutanga, chikoro chekuwedzera projekiti uye chikamu chepasi-chikoro. Pakati pavo, iyo chaiyo inobhadharwa mutero wamabhizinesi ane basic score ichave yakapihwa nebazi rezvemitero, iyo data yekuita basa rezvemabhizimusi ichave yakapihwa nebazi rezvezvinhu zvakasikwa, iyo data yekushandisa bhizinesi simba kusanganisira magetsi uye muputi zvichapihwa nemagetsi. dhipatimendi nekambani inopa chizi, uye dhata yekubviswa kwemvura bhizimusi (inosanganisira mvura yemapaipi, mvura inozviperekedza uye mvura yekumaindasitiri) ichapihwa nekambani inopa mvura.
Iyo yekuwedzera kana minus-mid-mapurojekiti anosanganisira kukwidziridzwa kwehunyanzvi, kutsvaga nekuvandudza dhizaini, bhizinesi sosi, kugadzirisa kwebhizinesi, ukuru hwebhizinesi uye simba, kugadziridzwa kwekuchengetedza, nezvimwewo semuenzaniso, maererano nekusimudzira kwetekinoroji, apo bhizinesi rezvematunhu rekusimudzira upfumi rinopfuura 1 mamirioni yuan, 0,0 mapoinzi anozowedzerwa kune imwe neimwe miriyoni imwechete yakawedzerwa mari, neiyo yepamusoro isingapfuuri 3 mapoinzi.0.5 mapoinzi emabhizinesi akashongedzerwa otomatiki nzira yekushambadzira ye dyestuff uye kuiswa mukushandiswa. Nezve r & d uye dhizaini, iyo technical kituo, maindasitiri ekugadzira nzvimbo, kiyi ma laboratori anokosha emabhizinesi, uye bhizinesi engineering uye tekinoroji yekutsidzira nzvimbo mukati menguva yekuvimbika ichave yakapihwa mazana maviri ezviuru padanho rezve manisita, 0.5 mapoinzi padunhu rezvematunhu, uye 1.5 mapoinzi padanho renyika. Yeprovince yakakwira uye nyowani tekinoroji bhizimusi pamwe ne2,2, yenyika yepamusoro uye nyowani tekinoroji bhizinesi pamwe ne0,5, mudunhu nyanzvi bhizinesi idzva pamwe ne2,2, purovhinzi yesainzi uye tekinoroji diki huru inotungamira bhizinesi pamwe ne0.3, purogiramu yemakwikwi emunyika imwe chete bhizimusi uye 0.4, yenyika imwe yemakambani emabhizimusi. etc. Kune mabhizinesi emhando, kukurudzira manejimendi, kuchengetedza kuchengetedzwa uye zvimwe zvinhu zvemamwe mamiriro ezvinhu. Ehezve, kune zvakare zvinhu zvichabvisiswa, kunyanya zvinosanganisira nyaya dzekutyorwa kwenzvimbo, kutyorwa kwekuchengetedzeka kwemabasa kana kutyorwa kwemoto uchitsvagurudzwa uye kupomedzerwa, uye mabhizinesi achabvisiswa nzvimbo. Kuburikidza neiyi tsika yekuongorora, yemunharaunda inotarisira kutungamira kudhinda uye kupfekedza mabhizinesi kumhando, yepamusoro-yekupedzisira uye yakasvibira fashoni.
Pamhepo anosarudza mutengesi
Quanzhou kudhinda uye kudhiza indasitiri maitiro ezvekuvandudza maitiro, kwete chete mune mhedzisiro yekupedzisira, asiwo mukuguma kwebhizinesi. Munguva pfupi yapfuura, yekutanga dyestuffs uye rubatsiro pamhepo kutengeserana kwakanaka kwakatangwa neyekutsikisa uye dhaya bhizinesi muShishi kwakaitwa. Izvo zvinodzidziswa kuti mumazuva gumi nemana, bhizimusi e-commerce chikuva rakaona kudarika zviuru mazana matanhatu emapeji, iyo yakakurumbira svumbunuro sarudzo yakaona kupfuura zviuru mazana matatu ezviuru zvemapeji, uye 30 indasitiri midhiya nenzvimbo dzewebsite dzakashuma zvinopfuura mazana matatu ezviuru zvemapeji maonero. Mazana emabhizimusi emunharaunda anodhinda uye anodhiza akatora chikamu mukuratidzira nekutengesa mumhepo, uye kuitisa kutenga-mapoka kuchiratidziro nekutengesa. Zvichienderana nehuwandu husina kukwana, anopfuura zana emakambani anobatsira dhayi-rubatsiro kubva kumba nekune dzimwe nyika, kusanganisira Zhejiang Longsheng, Chuanhua Zhili, Anoki, Zhejiang Boao, Zhejiang Wanfeng zvichingodaro, vakapindawo pakuratidzira uku, vachikwezva vanopfuura zviuru makumi maviri vevaratidziri vekunze pamwe nevekunze.
Zvinonzi dyestuffs uye Auxaries online kutengeserana kurudziro ichagadzira chitsva chikutsvagiridzo uye kuchinjana pakati peedestuffs, Auxeraries nekudhindisa uye mabhizinesi ekudaya, inopa nzira nyowani yekutsinhana nekudyidzana pakati pemabhizimusi ari pamusoro uye anodzika emabhizimusi. cheni kumba uye kune dzimwe nyika, uye nekupa ikirasi nyowani yekutsinhana nekudzidza pakati pekudhinda uye kudhaya mabhizinesi nevashandi vayo vemuindasitiri.
Vanoronga vakati mutengo wakaderera uye wakanakira wekutengeserana online, haufanane neanowanikwa kune mamwe mamiriro ezvinhu pari zvino ekudzivirira uye kudzora kwechirwere uye kutangazve kwebasa nekugadzira. "Semuratidziri, tinogona kushanyira nekutarisa mudzimba nekune dzimwe nyika. dyestuff vanowedzera vatengesi uye vanogoverana nyanzvi dzakawanda hurukuro kuburikidza neInternet e-commerce platform vasingabve pamba. "akadaro mumwe muratidzi. Uye indasitiri yakatiwo, kuburikidza neratidziro yepamhepo uye nhaurirano yepamhepo yevashandi vekutenga, mabhizinesi ezvekutengesa dhayi nezvimwe. Kuziva kuenzanisa kwemhando uye mutengo, kwete chete iri nyore kwazvo, uye vanofarira vatengesi, zvigadzirwa zvakadikanwa, kuderedza kutenga kwekutenga.
Nguva yekutumira: Jul-29-2020